ဆိုးသွမ်း: သားတစ်ယောက်၏....ဖွင့်ဟ ၀န်ခံချက်
Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:29 AM
“ အေးကွ...ဒီကိုမလာခင် ဟိုတနေ့က ပစ္စည်းသယ်ရင်း ထိမိသွားတာ တဲ့ ”
အထူးသဖြင့် အဖေ့အတွက် သူလိုချင်တဲ့ နာရီလေးတစ်လုံးကို ကျွန်တော်လခလေးနဲ့ ၀ယ်ပေးလိုက်မယ် ၀ယ်ပေးတဲ့ အချိန်မှာမှ အဖေတခုခု ဖြစ်သွားခဲ့ရင် ကျွန်တော် ဒီနာရီကို ဘယ်သူ့ကို ပေးရတော့မှာလဲ။ ( ဒီနေရာမှာ အဖေမရှိတော့တဲ့ သူတွေကို ကျွန်တော် အရမ်းကိုယ်ချင်း စာပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ် )။ ဒီနာရီလေး တလုံးနဲ့ အဖေ့ကို ကျေးဇူးဆပ်တာ မလုံလောက်မှန်း သိပေမယ့် အဖေအတွက် နာရီအကောင်းစားလေး တစ်လုံးလောက် လက်ဆောင်ပေးဖို့ အခုအချိန်က စပြီး ကျွန်တော် ဆုံးဖြက်ချက် ချလိုက်တော့တယ်။ အဖေ၀တ်ပါစေ။ သူဟာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လို့ သေဆုံးသွားသည့် တိုင်အောင် သူ့ဘ၀မှာ အဖိုးတန် နာရီတလုံးကို သူမွေးထားတဲ့ သားက တန်ဖိုးထား လက်ဆောင်ပေးလို့ ၀တ်ဆင်ခဲ့ရတယ် ဆိုတာ သူမှတ်ယူသွားရင် ဒါဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ဘ၀တလျှောက်လုံး ကြည်နှုးနေရမယ့် အကြောင်းအရာတစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော်ပြန်ရင် လက်ဆောင်ပေးမယ့် အဖိုးတန် နာရီလေးကို အဖေ၀တ်ရင်း သူ့သူငယ်ချင်းတွေ ကြားထဲမှာ အဖေဘယ်လောက် ဂုဏ်ယူလိုက်မလဲ။ မကြားရဘဲ သိနိင်တဲ့ စကားတွေက “ ဒီနာရီပေ့ါ....င့ါသား ၀ယ်ပေးထားတာလေ ” ဆိုတဲ့ အဖေ့ရဲ့ ပြုံးနေတဲ့ မျက်နှာကို မြင်ယောင်မိပါတယ်။
အို ... ကိုဆိုးသွမ်း
အခု ပိုစ့်ကလေးကို ဖတ်မိအပြီးမှာ ကျွန်တော် ကြက်သီးမွေးညင်းဖြန်းဖြန်းထ အောင်ကို ခံစားမိပါရဲ့ ။ ကျွန်တော်လည်း အဝေးရောက်သားတစ်ယောက်မို့ ကိုဆိုးသွမ်းရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲက ခံစားမှုကို မျှဝေခံစားမိပါတယ်၊ နားလည်မိပါတယ်ဗျာ ...။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာ ကျွန်တော် ဖေဖေကိုလည်း သိပ်ကို သတိရသွားမိပါတယ်။
ဟုတ်တယ် ကိုဆိုးသွမ်း ...
အဖေတွေဟာ အဲဒီ့အတိုင်းပဲ ... သူတို့ ကိုယ်တိုင်ကသာ ကန္တရလို ခမ်းခြောက်ချင် ခမ်းခြောက်နေမယ် သားသမီးကိုတော့ အိုအေစစ်တစ်ခုလို စိုပြေစိမ်းလန်းစေချင်တယ် ... သူတို့ရဲ့ သစ်ကိုင်းတွေကသာ ခြောက်သွေ့ကောင်းခြောက်သွေ့မယ်၊ သူတို့ သားသမီးကို တော့ ရွက်နုလို စိမ်းလန်းစေချင်တယ်။ သူတို့ ဆန္ဒကို ဘယ်တော့မှ ထုတ်မပြော၊ ဖော်မပြပဲ သားသမီးရဲ့ မျက်နှာကိုပဲ အရိပ်အကဲကြည့်ပြီး လိုအပ်တာမှန်သမျှကို ဖြည့်ဆည်းပေးတယ် ... ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ မသိတတ်ခင်တုန်းက လျစ်လျူရှုမိတာကို အသာ ထားနိုင်ပေမယ့် တတ်သိ၊ နားလည်နိုင်တဲ့အခါမှာ လျစ်လျူရှုထားမိတာကတော့ မဖြစ်သင့်တဲ့ အရာတစ်ခုလို့ ကျွန်တော် နားလည်သွားမိတယ် ... ။
အခုလို နာရီလေးတစ်လုံးကနေ ပေးလိုက်တဲ့ အသိတရားလေးတစ်ခုဟာ သိပ်ကို တာသွားစေမယ့် အသိဥာဏ်တွေ အတွေးအခေါ်တွေ၊ နားလည်မှုတွေကို ကိုဆိုးသွမ်း ရင်ဘတ်ထဲ၊ ခေါင်းထဲ၊ နှလုံးသားထဲကို ထည့်သွင်းပေးလိုက်တာပါပဲ၊ ကိုဆိုးသွမ်းဖေဖေရဲ့ မေတ္တာအဟုန်ကို တန်ဖိုးထား လေးစားကြည်ညိုနေမိပါတယ်၊ အခုလို အဖေမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကိုဆိုးသွမ်းအတွက်လည်း ထပ်တူထပ်မျှ ဂုဏ်ယူနေမိပါတယ်၊ ကိုဆိုးသွမ်း ၀ယ်ပေးမယ့် နာရီလေးကို ရတဲ့အခါ ကိုဆိုးသွမ်းဖေဖေ ပြုံးနေမယ် အပြုံးကို ကျွန်တော် မြင်ချင်လိုက်တာဗျာ ... ။
မိဘမေတ္တာနဲ့ ကျေးဇူးကို အထူးသိတတ်တဲ့ သားသမီးဟာ ဘယ်အခါမှ ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ပါဘူး၊ ကိုဆိုးသွမ်းရဲ့ ဖခင်အပေါ်ထားအပ်တဲ့ တုံလှယ်မေတ္တာကို လေးစားအားကျဂုဏ်ယူလျှက် .... ။
ညီလည်းမနေ့ကမှ အဖေ့ကို သတိရလို့ ပို့စ်လေးတစ်ပုဒ်ရေးလိုက်သေးတယ် အစ်ကိုရေးထားလာတောက်မမှီပေမယ့် အဖေ့အတွက် ၇င်ဖွင့်ခွင့်လေးရလို့ ကြည်နူးမိတယ် ရေးထားတာ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျို့ ကျနော်တို့ အဖြည့်ခံတွေကို မေ့ထားကြတာပဲ မေ့ဟန်ဆောင်တာ သိသိကြီးနဲ့ပေါ့ ။
ဒီနေ့ တော့..ညကအိပ်မက်ကောင်းရဲ့သား နဲ့..
Blog တွေ လိုက်ဖတ် ရတာ..ငိုချင် မိ စရာတွေ ချည်း..
ခုပဲ..မောင်လေးမျိုး ရဲ့ အဘ အကြောင်း ဖတ်ပြီး..
ကြည်နူး မျက်ရည်ဝဲ လာခဲ့ တာ...
အစ်မ ရဲ့ ဖေဖေ ကို မျက်စိထဲ ပြန်မြင်ယောင်လာပြီး.
လွမ်း လိုက်တာကွာ...ဖေဖေ က ဒီလောက ထဲ က အပြီး အပိုင် ထွက်ခွာ ခဲ့ ပြီ......
မောင်လေး ရဲ့ အဖေ လိုပဲ...သံပတ်နဲ့ဆီကိုနာရီလေးက
အဖေ့ရဲ့ အသဲ စွဲ ပေါ့..
တစ်သက်လုံး... ဆီကို နာရီလေး ပဲ ပတ်သွား ခဲ့ တာ...
အဖေ့ နောက်ဆုံး ကာလတွေမှာ တော့...အစ်မ က အ
ဝေးကြီး မှာ ရောက်နေခဲ့ ပြီ.....
နှစ်ခေါက်လောက် ဖတ်သွားတယ်။ ထပ်တူထပ်မျှ ပါပဲဗျာ
Lay Nhyot Shin said...
ညီလေးရေ.. အဖေ့အကြောင်းကိုဖတ်ပြီး.... အဖေ့ကို သတိရသွားတယ်....
ပြောမိရင် ငိုမိမှာစိုးလို့ မပြောပါရစေနဲ့တော့ ပိုက်ဆံ မြန်မြန်စုမိပါစေ. အရမ်းဈေးကြီးစရာ မလိုပါဘူး။ ဆီကိုလောက် ရရင် တော်ပါပြီ.။ အသက်ကြီးလာရင် ပိုတောင်နှမျောလာတတ်သေးတယ်။ ဘာဖြေစ်လို့လဲ ဆိုောတ့ ပိုက်ဆံက မဝင်တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီမဟုတ်လား. အဲဒီတော့ အိုမီဂါ မလို တစ်ဆော့မလို.။ ဆီကိုဆိုရပါပြီ. အမြန်ဝယ်နိုင်ပါစေ။
(သတိရတယ် အဖေနဲ့ အမေ။။ ) :(
ကိုဆိုးသွမ်း အတွက် မိဘကို(အဖေ) ကို ကျေးဇူးဆပ်ဖို့ အချိန်ရပါသေးတယ် အချိန်မှီသတိရတဲ့ အတွက် ကိုဆိုးသွမ်းအတွက်လည်း ကုသိုလ်ရသလို ကိုဆိုးသွမ်းအဖေလည်း မမျှော်မှန်းတတ်အောင် ကြည်နူးနေမှာပါ...
သူတောင်ပေါ်ကို တွန်းတင်ခဲ့တာ ခုနှစ်လုံး
မိဘဟာ သားသမီးနဲ့ ဝေးရတယ်
စကားနည်းနည်းနဲ့ တရားမြဲရင်း အိုခဲ့ပြီ
ကိုဆိုးသွမ်းရေ ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အဖေကဗျာ တစ်ပုဒ်ကို ကိုဆိုးသွမ်းအတွက်သယ်လာပေးတာ
ကျွန်တော်တို့ကျတော့ အဖေအတွက်နည်းနည်းလေးတောင် ပြန်မပေးဆပ်နိုင်ဖြစ်နေမိတတ်ပါတယ် အဲဒီနာရီလေးအတွက်ပိုက်ဆံအမြန်ပြည့်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ကိုဆိုးသွမ်း ခင်မင်လေးစားခြင်းများစွာဖြင့်
မောင်လေးရေ... မိဘဆိုတာ သားသမီးဆီက မမျှော်လင့်တတ်ပေမယ့် သားသမီးက သိတတ်ပြီး ကန်တော့ရင်တော့ တစ်သက်လုံး တစ်ယုတယ ရွှေလိုဥထားတတ်တာ။ ပါးစပ်ဖျားကလည်း မချတော့ဖူး။ အသက်ရှိတုန်းမှာ၊ ကန်တော့ခွင့်ရှိတုန်းမှာ နောက်မကျပါစေနဲ့။ ဆန်ဒတွေ အမြန်ဆုံးပြည့်ပါစေနော်း)
တကယ်ပဲ ပို့စ်အတွက် အားတက်သရော
အတွက် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကို ကြည်နူးမိပါတယ်။
ပြန်ရင် ဒီစာပိုဒ်လေးနဲ့ ကွန်မန့်ကို အဖေ့ကိုပြဦးမယ်။
Buy it quickly. I can imagine how much your father will be pleased.
I also miss my father so much. He also likes the branded watch but thats were only for me and my brother. I would buyanice one for my father too but I have to save money first :) .Thanks for good idea.